Uncategorized – Page 67 – Shabakadda Amiirnuur
Geeridu waa mid lama huraan ah oo qof walba sugeysa, ruux kastana wuxuu leeyahay wixii uu hor marsado kheyr iyo shar intaba. Dhawaan waxaa geeriyooday Maxamad Qanyare Afrax oo kamid ahaa siyaasiyiintii Muqdisho kaasoo aan hadda u baahnayn saan is leeyahay in taariikhdiisii laga hadlo waayo wuxuu ahaa nin la […]
Isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho waxaa saaka ku geeriyooday Max’med Qanyare Afrax oo muddo kusoo jiray siyaasadda dalka Soomaaliya ee ku dhisan dabadhilifnimada. Max’med Qanyar ayaa sanadadii lasoo dhaafay ku xanuunsanayay gudaha magaalada Muqdisho kadib markii uu ka fadhiistay siyaasadda sanaddii 2012. Qanyare ayaa caan ka ahaa Koonfurta Soomaaliya gaar […]
Mareykanka oo sheegtay Mas’uuliyadda Dilka Ganacsade Aboow Cali Waardiyoow.
War rasmi ah oo kasoo baxay Taliska ciidanka Mareykanka qaaradda Afrika ee loo yaqaan (AFRICOM) ayuu ku sheegtay mas’uuliyadda duqeyn diyaaradeed oo maalin ka hor ka dhacday duleedka deegaanka Kuunyo Barroow. Mareykanku waxay sheegeen in duqeyntaas ay ku dileen dagaalyahan katirsan Xarakada Al Shabaab ayna fulinta duqeyntaas qeyb ka tahay […]